Thola amabhishi amahle kakhulu eTenerife | Izindaba Zokuhamba
Tenerife amabhishi nudist
USusana Garcia | 31/03/2021 15:25 | General, Amabhishi, Tenerife
La Isiqhingi saseTenerife singesinye sezindawo ezifunwa kakhulu eSpain ngesimo sezulu sayo esihle esifudumele unyaka wonke kanye nenani elikhulu lamabhishi elinalo. Eziningi zalezi zingamabhishi anqunu futhi zikuvumela ukuthi wenze i-naturism buthule ngenkathi ujabulela ilanga nokubhukuda okuhle. Uma uzovakashela lesi siqhingi ungahle ufune ukwazi okwengeziwe ngamabhishi ama-nudist enawo nokuthi anikezani.
I-Las amabhishi anqunu anganikela ngobunqunu bamahhala noma kube yizindawo lapho kwenziwa khona ubunqunu. Iningi labo likuvumela ukuthi ukhethe ngokukhululekile ukuthi ngubani olivakashelayo, ukujabulela zonke izinketho. Sizobona ukuthi isiqhingi saseTenerife eCanary Islands singasinikeza ini mayelana namabhishi enqunu.
1 Ibhishi laseLa Tejita
2 Ibhishi laseLos Morteros
3 Ibhishi laseLa Pelada
4 IBlue Mountain Beach
5 Ibhishi lasePatos
6 Ibhishi laseLas Gaviotas
7 Ibhishi laseBenijo
Ibhishi laseLa Tejita
La ITejita ibhishi elinesihlabathi elinabela eduze kweNtaba Ebomvu, okungenye yezindawo ezivelele kakhulu kulesi siqhingi ezingabonakala emoyeni. Lolu lolwandle luvelela amanzi alo ahlanzekile nokuba yindawo yokuntweza phezu kwamanzi, ngoba imvamisa lunamagagasi nomoya. Isiza okufanele sivakashelwe, yize kunamabhishi amaningi acashile, kepha noma kunjalo ivelele indawo etholakala kuyo nokuba ngenye yezidume kakhulu.
Ibhishi laseLos Morteros
Leli bhishi lisethekwini elincane, ngakho-ke lisondelene kakhulu futhi lamukelekile kunamanye amakhulu. Itholakala eduze kwe- Indawo Yemvelo Yamawa aseLa Caleta kanye nokufuduka kwabantu abanegama elifanayo, okuyindawo ekahle yokuhlala. Leli cove lihlukanisiwe uma siliqhathanisa nezinye kepha limnandi kakhulu futhi lithule, ngakho-ke kufanelekile. Kuyindawo yemvelo evikelwe ngakho-ke sizozithola sisendaweni enhle kakhulu lapho kungenziwa khona ubunqunu. Ngaphezu kwalokho, inikezela ngamanzi acwebile e-crystal alungele ukushushuluza noma ukutshuza.
Ibhishi laseLa Pelada
Lesi siqhingi sinamava amaningi ngenxa yokuguguleka kolwandle edwaleni lentaba-mlilo eminyakeni edlule, ngakho-ke lisinikeza izindawo eziningi lapho singenza khona ubunqunu ngendlela ethule. Ibhishi laseLa Pelada lisendaweni edlule nje kwendawo yase-El Médano futhi kuyisigaxa esincane esiphakathi kwamatshe nesihlabathi esimnyama esijwayelekile sesiqhingi futhi nobude obungamamitha angama-80. Incane kodwa iyathokomala, ayinazo izinsiza kepha ungashiya imoto yakho eduze ukuze kube yindlela enhle uma ungafuni ukuhamba kakhulu.
IBlue Mountain Beach
Lolu lolwandle luyabonakala uma ufika kulesi siqhingi ngoba liseduze nesikhumulo sezindiza. ngiyazi ngentaba-mlilo ebizwa ngokuthi iNtaba Ebomvu lokho kuyisici ngempela futhi okuvelele kwezwe. Lolu lolwandle lusinika nethuba lokwenza ubunqunu endaweni eyingqayizivele yokwakheka komhlaba esingayitholi ePeninsula, ngakho-ke akufanele sinqikaze ukuyifinyelela. I-Cove eyaziwa ngokuthi yiPlaya de Montaña Roja iyindawo esondelene kakhulu nolwandle lwaseLa Tejita olunabela eduze kwentaba futhi lwaziwa kangcono. Kuzo zombili ungenza ubunqunu yize leli cove elincane elisendaweni enamatshe lamukeleka kangcono.
Lona ibhishi lasendle libhekwa njengenye yezinhle kakhulu eTenerife ukwenza ubunqunu. Amanzi acwebile akwaCrystal, isihlabathi esimnyama nezintaba eziluhlaza ezigqamile futhi zakha ukuhlangana okumangalisayo kwemibala ekhangayo futhi ehlukile ngempela. Itholakala eduze nolwandle i-Ancón, ehlukaniswe ngomsele. Lolu bhishi lwase-Orotava luhle impela kodwa kufanele uqaphele lapho ugeza emisinga ngakho-ke alifanele kakhulu imindeni.
Ibhishi laseLas Gaviotas
Uma udlula olwandle iTeresitas, oludumile esiqhingini, kufanele ume ePlaya de las Gaviotas, lapho kuvunyelwe khona ubunqunu. Izungezwe yi amawa athile amangalisayo nobunqunu bukhululekile, okungukuthi, singakwazi ukugqoka isudi yokubhukuda noma cha. Okuwukuphela kwento ebuyela emuva ukuthi ekuphakameni kwamanzi kuncane, kepha uma sihamba emanzini aphansi singakujabulela kangcono kakhulu. Ingamamitha angama-250 kuphela ubude kepha ibhishi kude nezakhiwo zabavakashi endaweni ethulile yingakho kungaphelela ukujabulela usuku olukhululekile olwandle.
Leli bhishi lidume ngempela futhi liyabonakala nguRoque Benijo noRoque la Rapadura. Kungumfanekiso owaziwayo weTenerife kanye nolunye lolwandle lwe-nudism. Ibhishi lasendle elinesihlabathi esimnyama namagagasi amaningi esingeke sawaphuthelwa lapho siya esiqhingini. Futhi kuyindawo enhle yokujabulela ukushona kwelanga okuhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Tenerife amabhishi nudist